China Wholesale Glitter Mvura Yakagadziriswa Mashiripiti Anonamira Eyeliner Nemavara Ezvinyorwa Mabhokisi fekitori uye vagadziri | Weiti
Wholesale Glitter Mvura Yakagadziriswa Mashiripiti Anonamira Eyeliner Nemavara Ezvinyorwa Mabhokisi
1, 2 mu1 inozvinamira-yega mvura eyeliner peni
2, Isina mvura uye inogara kwenguva refu
3, Mashiripiti edu eyeliner ndeyemanyepo maronda ekunamatira
4, Brand nyowani fomura ine yekunamatira tekinoroji
Liquid Kuzvinamatira Eyeliner Pen
Kalocils 2 mu1 Yega-Inonamira Liquid Eyeliner iri fomura nyowani ine yekunamatira tekinoroji, yekuzvinamatira, yakachengeteka & yakapfava, haina kukuvadza kumeso ako, kunhuhwirira kwakanaka, kutsetseka uye zvakasikwa, isina mvura uye sweatproof, ndiyo sarudzo yakanakisa yako maronda, anokupa iwe chinoshamisa chiitiko. Eyeliner yedu ndeyekuputika glue uye eyeliner, yakasimba kubata yeashes, iwe unogona kupfeka eyelashes neyedu mashiripiti eyeliner panzvimbo yeglue kana magnetic eyeliner.
Inodzokororwa Uye Nyore Kunyorera
Yakareruka kushandisa maronda kwemasekondi makumi matatu. Sevha nguva yako uye akareruka matanho. Iyo nhare inosunungura iwe kubva kunetseka uye kunyadziswa kwekudonhedza eyelashes. Nyore 3 Matanho ekupfeka eyelashes uye saka akakodzera kune vanotanga! Zunza liner, uye dhonza iyo liner pamwe neyako lash line curl, pakupedzisira upfekedze maronda. Inogona kushandiswa nechero lashes dzenhema.
Nzira yekushandisa sei kunamatira eyeliner?
1. Zunza eyeliner 10-20 nguva usati washandisa.
2. Dhirowa eyeliner padivi peyako eyelashes.
3. Sunga eyelashes neako tweezers.
4, Zvinyoro nyora eyelashes munzvimbo yeziso uye pedza kupfeka.
Ko eyelash yekunamatira eyeliner inoshanda sei?
Chigadzirwa chinoshanda nekuisa pasi yakatetepa uye chaiyo mutsara wekunamatira (uye pigment, kana uri kushandisa nhema), inova tacky mushure memasekondi mashoma. Chero chero rudzi rwemanyepo ekunyepedzera runogona kubva rwaiswa pamusoro peye smudge-proof tambo, uko irwo rucharamba rwakaiswa seglue (asi kune avo vedu vanowanzo kupunzika vakadenhwa, vasina nyonganiso uye minwe inonamira).
Tsika Yakavanzika Label Eyeliner Mabhokisi
Isu tine akasiyana eyeliner ekuputira mabhokisi, eyeliner kesi, nezvimwe mune hombe yakagadzirira stock. Pane kudaro, yakagadzirirwa yakavanzika sevhisi sevhisi inowanikwa kwatiri. Kazhinji, kune akagadzirira masokisi emabhokisi kana makesi, isu tinotsigira 3d UV Kudhinda, kana iwe uchida chimiro chakasiyana uye saizi yemabhokisi, inogona zvakare kuve yakasarudzika. Izvo iwe zvaunoda kuti uite kutitumira isu iyo logo uye iyo vara raunoda. Tichanyatso gadzira yakanakisa eyelash kurongedza iwe.
Pashure: Bulk Yakachipa Mutengo Yakavanzika Label Strip Lashes 25mm Mink Eyelash Vendor
Zvadaro: OEM 2020 Inopisa Yakakurumbira Yeziso Liner Isina Mvura Magetsi Liquid Eyeliner Adhesive Glue Pen
Eyeliner Yakavanzika Chinyorwa
Mvura Yakagadziriswa Eyeliner
OEM Factory Bulk namira 2 muna 1 Waterproof Cus ...
Eyelash Kuwedzeredzwa, Vatengesi ve Eyelash, lipgloss, eyeliner, Ziso Lashes, mink lashes,